Izingxube "Fresolak": ukubuyekezwa kokudla kwezingane
Wonke umuntu uyazi ukuthi umsoco ongcono kakhulu wengane ubisi lomama. Noma kunjalo, izici ezihlukahlukene zingathinta ukwakhiwa komama omncane, bese sekuyisikhathi sokukhetha ifomu lokudla okufakelwayo.
Ake sikhulume ngokudla komntwana we-Dutch production - "Fisolak". Ukubuyekeza mayelana nalokhu kulayini kuqoqwe ngezinamba ezinkulu namuhla, njengoba kuthengisiwe ensimini yeRashiya Federation iminyaka engaphezu kwengu-10. Umbuzo oyinhloko abazali abawuthandayo uma ushintsha ukudla okufakelwayo: "Yikuphi okulandelayo okufanele umntwana?"
Ingxube yezingane "Fisolak": ukubuyekezwa kochwepheshe nabazali
Le nkampani ikhiqiza ukudla kwezingane ezinhlobonhlobo ezihlukahlukene. Kunezinhlobo eziningi ezifana nezici ezihlukile zokugaya izingane ezincane ezingeni ezahlukene zokuthuthukiswa. Namuhla, iningi labahlengikazi lenza okukhethayo ekuthandeni lokhu kokudla kwezingane, njengoba kuyindlela ephelele equkethe ama-prebiotics nama-nucleotide. Ngenxa yokucubungula okuyingqayizivele kwamaprotheni, umkhiqizi unikeza omama i-formula elula yokugaya yokufakelwa kwezingane kusukela ezinsukwini zokuqala zokuphila. Ingxube edingekayo yamavithamini, i-nucleotides, izakhi zokulandelela kanye nosawoti wamaminerali inikeza usana ingxube ye "Fisolak". Ubufakazi bezingane babonisa ukuthi zonke izingxenye ezidingekayo zokuthuthukiswa okuhambisanayo nokukhula kwengane zikhona kulokhu kudla. Kodwa-ke, ngemva kokufunda amanothi abazali, omunye angakwazi ukubona ukuthi akubona bonke ababelana ngombono wezochwepheshe. Ezinye izingane ziye zabona ushintsho emathunjini, omunye umuntu akahambisani nokuxuba, noma kukhona izikhalazo zokuphendula okweqile. Kungaba kuhle ukucabanga ukuthi, mhlawumbe, ezimweni ezinjalo kudingekile ukukhetha ingxube efanele. Phela, inkampani iye yasungula kanye nezinketho ze-hypoallergenic, nokudla okunomsoco kwabantwana abangahambisani nokuphika amaprotheni, nokuningi okuningi.
"I-Fresolak" hypoallergenic: ukubuyekezwa kwabahlengikazi nabazali
Kusukela namhlanje kunomthelela ekukhuleni komzwelo kubantu, ikakhulukazi ezinganeni ezincane, umugqa wokudla wabantwana uhlanganisa izixube ezikhethekile: "Fresolak GA-1" ne "Fisolak GA-2". Lokhu kuhloswe kuhloswe ukunciphisa noma yikuphi ukubonakaliswa kwezilwane. Kunconywa ukuyifaka ekudleni, ngisho noma ingane yakho ijwayele ukuxilongwa noma ukunye ukuphendula. Njalo uthintane nodokotela wezingane ngaphambi kokuba unike ingane yakho enye yemikhiqizo ekhethekile ye "Fresolac". Ubufakazi bobazali bubonisa ukuthi ukungabi nolwazi kolwazi lokuqoqa ukudla komntwana ngezinye izikhathi kuholela ekungahambi kahle ekusebenzeni kwesisu kanye namathumbu. Odokotela bezingane baphawula izikhalazo zokuqothulwa noma isitoli esingavamile kakhulu. Ngaphezu kwalokho, unombala oluhlaza futhi iphunga elibi elibi. Kodwa-ke, kamuva kwacaca ukuthi abazali babengazi ukuthi bangenisa kanjani imishini ekhethekile ekudleni.
Ngenyanga yesithupha yokuphila, izinsana sezivele zidinga okusanhlamvu okuhlukile. Ingxube yezingane "Friso" izosiza lapha. Ulayini olunikeziwe luyilayisi, ummbila, ubisi lwe-kashki. Ukwakhiwa kwalesi sidlo sezingane kubandakanya izithako ezihlukahlukene zezithelo eziye zahlolwe ngokungenabungozi, futhi ziye zavunyelwa odokotela bezingane.
Isisindo esingakanani ingane okufanele sibe nayo ngesikhathi sokuthuthukiswa okujwayelekile
Amagundane ekhanda - ukuthi ungasusa kanjani?
I-Mandalas yezingane njengendlela yokwelapha ubuciko
Florence Amahhotela - izimo best for the Ongoti
JSC "Demikhovsky Engineering Isitshalo"
Isibalo sentombazane sibonisa izwe lakhe langaphakathi
Igama sokuqonda izifinyezo party, okuyinto esadlala indima ebalulekile emlandweni wezwe lethu: Party
Yini lo isiraphu izinsana ukhwehlela?